नेपाल आज | प्रिज्मासँगको सम्वन्धको हल्ला फैलाएर फुत्किन खोज्दै सागर (बले) ?
समाचार मनोरञ्जन मोडेल वाच
प्रिज्मासँगको सम्वन्धको हल्ला फैलाएर फुत्किन खोज्दै सागर (बले) ?
टिकटकबाट उदाएकी कलाकार प्रिज्मा खतिवडासँगको व्रेकअपका कारण आलोचनाको शिकार भएका हाँस्य कलाकार तथा मोडल सागर लम्साल ‘बले’ ले धेरै पछाडि मुख खोलेका छन् । उनले आफू र प्रिज्माबीच प्रेम सम्वन्ध नै नभएकाले ‘ब्रेकअप’ को कुरै नआउने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले आफूहरु मिल्ने साथी मात्र भएको दाबी गर्दै भने–‘म आफैं केही महिनादेखि मिडियासँग टाढा छु । मेरो पारिवारिक समस्याका कारण म मिडियामा आउन नसकेको हुँ। यो बीचमा मैले प्रिज्मा र प्रिन्सी खतिवडाको अन्तर्वार्ता पनि हेरें । उहाँहरु आफ्नो विगतलाई सम्झिएर भावुक हुनुभएको थियो । रुने प्रिन्सी, माफी माग्ने प्रिज्मा र गाली खाने म भएँ ।’
उनले आफनो विवाहको कुरा पनि असत्य भएको दावी गरे। ‘अहिले विहेको कुनै योजना छैन’– उनले भने। सागरले प्रिज्मा र प्रिन्सी आफ्नो लागि उस्तै भएको समेत बताए । अरुका लागि प्रिज्मा र प्रिन्सी फरक भएपनि उनीहरु आफनो लागि एकै भएको र मिल्ने साथी मात्रै भएको वताए ।
यसअघि सागर र प्रिज्माको अफेयरको चर्चा उत्कर्षमा थियो। यसै वेला एउटा अन्तरवार्ताका क्रममा प्रिन्सीले आफ्नो प्रेमको कुरालाई लिएर आँशु झारेपछि सबैले प्रिज्मा सम्झेर सागरलाई गाली गर्न थालेका थिए । त्यसपछि प्रिज्माले सागरसँग सार्वजनिक कार्यक्रममा माफी पनि मागिन।
यद्यपी प्रिज्मासँगको प्रेमको हल्ला भने सागरले स्वयम् फैलाएको कलाकारका बीचमा चर्चा छ। सामाजिक सञ्जालमा जव प्रेमको प्रसंग चरम उत्कर्षमा पुग्यो, अनि उनले नै विवाहको प्रसंग पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा ल्याएको उनीहरु वताउँछन् ।
सागरले अनावश्यक हल्ला चलाएपछि प्रिज्मा र प्रिन्सी दुवैजना उनीसँग विच्किएका छन् । प्रिज्मा र प्रिन्सिले सागरसँगको ब्यवसायीक सम्वन्ध पनि तोड्ने निर्णय गरेको स्रोत वताउँछ। पछिल्लो समय उनीहरु सँगै देखिएका छैनन् ।
सागर राम्री केटी देखेपछि जिस्केको जस्तो गर्दै नजिक हुन खोज्ने, उच्छृंखल शब्दको प्रयोग गर्ने, गलत नियले इसारा गर्नेलगायतका कमजोरीका कारण वदनाम छन् । सोही श्रृंखला प्रिज्मासँग पनि दोहोरिएको वताईन्छ।
सागर (बले) ले नै प्रचार गराएका रहेछन् प्रिज्मासँगको प्रेमको हल्ला
प्रिज्मा खतिवडा सागर लम्साल ‘बले’